युवाहरुको ढुकढुकी फागोलाई क्षेत्रीय सभापतिमा पुनः ल्याउन कार्यकर्ताको जोडबल – Complete Nepali News Portal
युवाहरुको ढुकढुकी फागोलाई क्षेत्रीय सभापतिमा पुनः ल्याउन कार्यकर्ताको जोडबल
ScotNepal July 11, 2021
उर्लाबारी । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाअधिवेशन नजिकिदै गर्दा नेता कार्यकर्ताहरूका बीच चुनावी माहोल तात्दै गएको छ ।
युवा नेता वर्तमान मोरङ क्षेत्र नं. १ का सभापति खड्ग फागोलाई पुनः सभापतिमा बलियो उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ । फागोकै कारण क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेस मजबुत र चलयामान बनेको कारण पनि उहाँलाई बलियो उम्मेदवारको रुपमा लिने गरिएको हो । तर, फागोले पुनः सभापतिमा उठ्ने वा नउठ्ने भन्ने विषयमा केही बोल्नु भएको छैन । उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयरसमेत रहनु भएका फागो प्रदेश नं. १ का चर्चित युवा नेताका रुपमा लिने गरिएको छ । उर्लाबारी नगरपालिकालाई नमूना र समृद्ध बनाउने अभियानमा अहोरात्र खट्नु हुने फागो सबैमाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ । फागो कहाँ समस्या लिएर जाने जो कोहीलाई पनि सहयोग गर्ने बानीका कारण पार्टीभित्र र वाहिर उत्तिकै लोकप्रियता देखिन्छ । आश्वासन मात्र लिएर फर्कनु नपर्ने भेटघाट भएका ब्यक्तिहरु बताउँछन् । सबैको समस्या तुरून्त समाधान गरिदिने व्यक्तिको रूपमा फागो चिनिनुहुन्छ । सरल ब्यवहार, सहयोगी भावना र सबैलाई सद्भावले हेर्ने उहाँको स्वभाव एबं दृष्टिकोण आफैँमा प्रशंसनीय छ । फागोलाई सर्वसम्मत रुपमै क्षेत्रीय सभापति ल्याउन कांग्रेसजनले आकांक्षा राखेका छन् । उहाँको क्रियाशिलता र लोकप्रियता क्षेत्रीय सभापतिका लागि बलियो कडी हो ।
पार्टीमा स्पष्ट वक्ता र क्षमतावान नेता वर्तमान सभापति फागो भएको भन्दै सबैले साथ र सहयोग गर्नु पर्ने कार्यकर्ताहरु बताउन थालेका छन् । फागोले पैसा कमाउन नभई जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा लागेको बताउने गर्नुहुन्छ । उहाँले कांग्रेस भनेको ठूला महलमा बस्नेमात्र होइन झुपडीमा बस्ने पनि भएको बताउादै सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ । फागोले हरेक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर पार्टीको कार्यक्रम र अन्य आन्दोलनको कमाण्ड सम्हाल्ने गर्नुभएको छ । ‘म लगायत मेरा साथीभाई पनि उहाँकै निर्देशनमा हरेक आन्दोलनमा अहिलेसम्म सहभागी हुँदै आइरहेको छौं’, नेपाल तरुण दल उर्लाबारी नगर सचिब राजन रायमाझीले भन्नुभयोे, ‘क्षमता भएकै कारण युवाहरू उहाँको पक्षमा खुलेर लागेका छौं । उहाँमा पुराना नेतालाई सम्मान गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई माया गर्ने क्षमता उहाँमा छ ।’ फागोलाई कार्यकर्ताको संरक्षण र पिरमर्का बुझ्ने नेताको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । पार्टीको हरेक आन्दोलन वा कार्यक्रम होस् या क्षेत्र नम्वर १ का नेता तथा कार्यकर्ता ब्यापक परिचालन हुँदै आएका छन् । उर्लाबारी–७ का जीवन चिमरियाले भन्नुभयो, ‘हामी युवा नेता खड्ग फागोलाई पुनः एक कार्यकाल क्षेत्रीय सभापति बनाउने अभियानमा लागि परेका छौं । किनकि उहाँ कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न सक्ने खुबी भएको नेता हो ।’ ‘उहाँको काम गर्ने शैली मन परेर नै हामी उहाँको खुलेर प्रशंसा गछौं’, उहाँले भन्नुभयो । ‘हरेक कार्यकर्ताको सुखदुःखमा साथ दिने भएकै कारण कार्यकर्ताको चाहना पनि नेता फागोलाई पुनः क्षेत्रीय सभापति बनाउने चाहना देखिएको छ ।
नेपाल–बेलायत आवागमन सहज बनाउन दुवै देशका सरकारलाई एनआरएन यूकेको आग्रह
अमेरिकाको ओहायोमा एकाबिहानै घरमा आगो लाग्दा ५ जना नेपाली भाषी...
युपिएफ र आइआइपिपि बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर
नेशनल बक्स अफिस तिज अवार्ड २०७८ भब्यताका साथ सम्पन्न
अमेरिका उच्च अध्ययन गर्न आएकी नेपाली चेली नौसेनाकी कमान्डर पदमा...
क्वालिटी इन्टरटेनमेन्ट अवार्डका मनोनयनलाई प्रमाणपत्र प्रदान